Redmi dị omimi na Snapdragon 730 ka agbapụla | Gam akporosis
Nkọwa dị iche iche nke Redmi nwere Snapdragon 730 na igwefoto atọ
N'oge na-adịbeghị anya, Redmi malitere smartphones Ihe ngosi RedN 7, Mara 7 Pro y Redmi 7 na China. Otú ọ dị, Fans nke ika ahụ na-atụsi anya ike ọbịbịa nke ndị a na-ekwu oke Redmi na Snapdragon 855 na onye ozo nwere igwefoto selfie, nke puru ibu otu ihe anyi na ekwu maka ya n’oge a.
A leaked image na ụfọdụ isi ụdịdị nke Redmi ohuru na abia ha apụtaputara naanị awa ole na ole gara aga. Ihe egosiputara bu nsonye nke mbu nke chipsets Qualcomm na agwa ndi ozo karie nke oma gwa anyi na anyi na eche onodu di elu adịchaghị. Ka anyị lebakwuo anya ...
El Samsung A80 AX, nke na-abịa na ntọala igwefoto atọ na-agbagharị, bụ ekwentị izizi ụwa iji rụọ ọrụ na Snapdragon 730, Qualcomm ọhụrụ 8nm mobile ikpo okwu. Agbanyeghị na ọ gaghị abụ naanị mkpanaka ekwuru SoC ogologo oge, dịka Redmi dị omimi ga-enwe ya, dịka ọhụụ ọhụrụ ahụ siri dị.
Leaked ụdịdị nke Redmi na Snapdragon 730
Ihe omuma a na-ekpughe na ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ China ga-enwe batrị ikike 4,000 mAh. Ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ekwentị dị elu n'etiti etiti, o yikarịrị ka ọ ga-enwe nkwado maka ịkwanye ngwa ngwa. N'aka, maka foto, ga-enwe ntọala kamera okpukpu atọ nke 48 MP + 8 MP + 13 MP.
Onyogho ahu leaked, na-egosi na ekwentị enịm n'ime a echebe ikpe, na-egosi na ga-egosipụta ụda egwu nke 3,5mm na igwefoto selfie na mmapụta. Nke a na-egosi na ọ ga-onwem na a ihuenyo enweghị notch.
Ikekwe ekwentị ọhụrụ ejiri Redmi na SD730 Ọ ga-abụ ọkwa gọọmentị tupu ụlọ ọrụ ahụ amalite Redmi na Snapdragon 855. Ọ bụ ihe amamihe dị ichere maka ntakịrị ọnya ịmatakwu banyere ya, ebe ndị a bụ ndị izizi na-apụta na ekwentị mkpanaaka a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwa dị iche iche nke Redmi nwere Snapdragon 730 na igwefoto atọ
Honour 20 ụbọchị ngosi